Faka idilesi yakho kwi Ukulungiswa kweedilesi kwaye ungenise. Ukuba indawo emephini ayichanekanga, ungatsala isiphawuli sakho kwindawo efanelekileyo (intle kakhulu, huh?). Ngoku uza kubona ikhonkco elithi "Khuphela" kwisihloko secandelo le-KML. Xa ucofa oku, unokuzikhuphelela kwifayile ukuze uyilayishe kwindawo yakho kamva.
Ukuba usebenzisa iWindowsPress, kuya kufuneka usebenze Iplagi yeGenerator yeXML by Arne Brachhold -Awuyi kufumana iplagi ebhetele okanye ebaluleke ngakumbi naphina! Olunye lwezona zinto zibalulekileyo kule plugin kukuba unokongeza ifayile ye-KML kuyo. Ngenisa i-URL epheleleyo yemephu yesayithi kwicandelo elongezelelweyo lamaphepha:
Kulungile ke masenze ngathi ndinendawo eyenzelwe ukuwohloka koMnqonqo kwaye idilesi yam ikuChula Vista. Kuya kuba nzima kakhulu kum ukuba ndibeke iSan Diego kuba idilesi yam ibonisa ukuba andikho. Ukuba ndiguqule ifayile yam yeKML nge http://www.addressfix.com/ kwaye ndiyise eSan Diego, emva koko xa ndithetha ngokuqikelelwayo kufuneka ndibe nengxaki encinane yokubeka “uxinzelelo lomqolo san diego?
Aug 6, 2008 ngo-1:08 PM
Ngentelekelelo, ewe. Khange ndifunde ukuba ingakanani ijografi esele iqalisile ukulinganisa iziphumo okwangoku, kodwa uGoogle uyaqhubeka nokucofa ii-algorithms zabo ukuze afumane iziphumo ezifunwa ngabantu ngokuzimeleyo kwinto wonke umntu ayifumanayo idumile. Uvavanyo luhlala luyindlela yokufumanisa!
Hey iqela lemigulukudu enkosi ngolu lwazi lumnandi kwi-KML. Bendicinga ngayo namhlanje kumxhasi kwaye bendifuna zombini amakhonkco kunye nolwazi olubanzi olufakiweyo apha. Andazi ukuba iya kukhokelela phi kwiingcebiso zam kumxhasi, kodwa ndicinga ukuba undincedile ukuba ndiqalise.